I-45% isuswe kwiVero ye-imeyile yokuBhalisela ukuZenzekelayo
NgoLwesihlanu, ngoJuni 27, 2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 27, 2014 Douglas Karr
Vero yinkonzo yokuthengisa ezenzekelayo ye-imeyile egxile ekwandiseni ukuguqulwa komsebenzisi kunye nokugcinwa. Usebenzisa ii-imeyile ekujoliswe kuzo ungenza ingeniso eyandisiweyo kwaye uphucule ukoneliseka kwabathengi
Martech Zone abafundi banokufumana I-45% isuswe kwirejista yeenyanga ezi-6 zesicwangciso esincinci seVero ngokusebenzisa ikhonkco lethu lokudibana!
IVero yokuThengisa nge-imeyile ibandakanya
Iiprofayili zomthengi ngamnye -Khangela idatha malunga nabathengi bakho kwindawo yogcino lwedatha yakho. Sebenzisa idatha oyiqokelelayo njengamagama wabathengi bakho, indawo, kunye neminyaka ukwahlula isiseko sedatha yakho kwaye uthumele ii-imeyile ezijolise kuzo ngakumbi. Ngokuhamba kwexesha uVero ulandelela ngokuzenzekelayo isenzo somthengi ngamnye kwiziko lakho lewebhu kubandakanya amaphepha abawatyelelayo, iifom abazingenisayo kunye namaqhosha abawacofileyo. Jonga nayiphi na iprofayile yomthengi nangaliphi na ixesha, kubandakanya nembali epheleleyo yeimeyile obathumele zona kunye nezenzo zabo emva kokuba bezifumene.
Iindaba zeDynamic -Yila amaqhekeza ashukumisayo, exesha lokwenyani asekwe kwinto eyenziwe ngabathengi (Umzekelo: Utyelele iphepha lamaxabiso amaxesha ama-4 ngaphambili) okanye iipropathi zabo (Umzekelo: eYurophu). Thumela iincwadana kwi-base yakho yonke yabathengi okanye wehle usebenzise amacandelo owenzileyo ukuthumela umyalezo olungileyo kubathengi abafanelekileyo. (Umzekelo: ubhalisele uvavanyo lwasimahla kodwa akazange ahlawule).
Uvavanyo lwe-A / B -Uvavanyo lukuvumela ukuba ufumanise ukuba yeyiphi na imigca yezifundo, evela kwiidilesi, ikopi yomzimba okanye itemplate abathengi bakho abanxulumene neyona nto ibhetele- kukunika ithuba elininzi lwengeniso. Ukuvavanya i-A / B kwimikhankaso yakho ezenzekelayo kunye neeleta kulula ngeVero. Yongeza nje umahluko kulo naliphi na iphulo olwenzileyo kwaye uchaze ipesenti yokwahlulahlula kwaye uVero uya kunika ingxelo eseleyo.
tags: vavanyoIiprofayili zabathengiIeleta zeendaba ezinamandlai-imeyile ezenzekelayoukumakethacandelojoliswe kuyokubangelaIi-imeyile ezibangelwe ngumsebenzisivero
Iimpazamo eziqhelekileyo zoPhuculo loMxholo ngeWordPress